Archive du 20200325
Nampitandrina ny fanjakana “Aleo miafy 15 andro, toy izay 900 isan’andro no maty”
Mihantra ary hamafisina ny fepetra tsy fahafahana mivezivezy na olona io na fiara eto Antananarivo sy any Toamasina, hoy ny Minisitry ny atitany sady sady Filohan’ny CCO Covid 19 Tianarivelo Razafimahefa.
Fiatrehana ny Coronavirus Mihorohoro koa ny any amin` ny faritra
Tsy eto an-drenivohitra ihany fa dia manomboka mihorohoro ny fiparitahan` ny Coronavirus fa ny any amin` ny faritra manerana ny nosy. Ireo mpandeha avy any Frantsa no tena lasibatra tato ho ato. Tany Belo sur Mer, ohatra dia vazaha vavy, mpitantana hotely ao an-toerana, tonga tany an-toerana ny zoma lasa teo no ahiahin` ny mponina. Isan’ireo mpandeha tamin’ny sidina faramparany avy any Frantsa ity vahaza ity no nidina aty amin’ny Faritra Menabe ary tonga ao Belo sur Mer.
Tapim-bava Azo eritreretina ny hizarana maimaimpoana azy
Nanao fanambarana ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana omaly fa hisy orinasa hamokatra tapim-bava na “masque” miisa 400.000 hanampy amin’ny fiatrehan’i Madagasikara ny Covid19.
BIANCO Madagasikara Amin` ny alalan` ny finday sy mailaka no handraisana ireo fitarainana
Manoloana ny hahamehana ara-pahasalamana vokatry ny fihanaky ny areti-mandoza COVID19 eto amintsika dia namoaka fanambarana ny avy eo anivon’ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na Bianco fa dia miato izany aloha ny fandraisana mivantana ny fitarainana sy fitorohana eo anivon’ny birao mandritry ny fotoana mampanan-kery ny hahamehana. Raisina amin’ny alalan’ny telefaonina, finday, mailaka ary i-toroka avokoa aloha izany, hoy ny fanazavana.
Fianakaviana tsy manan-kialofana Olona 338 nalefa eny Anosizato
Nangonina ireo fianakaviana tsy manan-kialofana teto an-drenivohitra, ny teny ambany tonelina, ny tamin’ny sisin-dalana, ny ambany tetezana… ary miisa 338 izy ireo natoby eny amin’ny Centre Social Anosizato izay toerana an'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Tanora mandray andraikitra Miantso fizarana tapim-bava
Manao antso avo ny fitondram-panjakana ny avy eo anivon’ny fikambanana Tanora mandray andraikitra na TMA mba hizara ireo fitaovana heverin’izy ireo fa madinika entina hiarovana amin’ny fihanak’ilay areti-mandripaka, Coronavirus.
Vidin’entana eny an-tsena Mbola misy sahy manararaotra ihany
Na eo aza ny fepetra apetraka sy fampitandremana ataon’ny avy eo anivon’ny fitondram-panjakana ny amin’ny tokony hampidinana ny vidin’entana ilaina an-davan’andro eny an-tsena dia mbola misy amin’ireo mpivarotra hatrany no mampihatra vidin’entana mihoam-pampana, raha ny fitarainan’ireo mpanjifa.
Biraon’ny Kaominina mikatona Nahemotra avokoa ny fisoratam-panambadiana
Nikatona avokoa nanomboka ny alatsinainy 23 martsa teo ireo biraom- panjakana eto amintsika. Tafiditra ao anatin'izany ny fokontany sy ny kaominina ialana amin'ny fivorivoriana sy iadiana amin'ny aretina coronavirus.
Behoririka Nangina tanteraka ny tanàna
Fepetra noraisina eto Antananarivo Renivohitra ny tsy fahafahan'ny rehetra mivoaka ny trano ho fifehezana ny fipariahan'ny valanaretina coronavirus. Maro ihany ny toerana tsy ahitana olona mbola mifamezivezy, indrindra fa ny tapany maraina. Isan'ny be olona ny eny Behoririka, saingy nangina tanteraka.